WAA MAXAY SABABTA DIGAAGGA U DHINTA: SABABO MACQUUL AH IYO TALLAABOOYIN KA HORTAG AH - BEERAHA DIGAAGA
Sababaha kala duwan ee sababta cowsku u dhintaan
Digaagga waxaa loo tixgeliyaa sida ugu macquulsan ee digaagga taranta. Si kastaba ha ahaatee, tani macnaheedu maaha in aysan u baahnayn inay abuuraan xaalado wanaagsan, si ay u ilaaliyaan nadiifinta guriga iyo tayada cuntada. Sababta keenta cudurada ayaa ah mid si kaamil ah u dhexgalaya daryeelka shimbirta. Sidee looga hortagaa waan sii wadeynaa.
Sababaha dhimashada xilliga qaboobaha
Cudurada ugu badan ee xilliga qaboobaha waa cudurada fayruska iyo faafa:
laryngotracheitis - Infekshin lagu daaweeyo Tromexin (2 g halkii litir oo biyo ah, illaa dhammeystirka soo kabashada);
bronchopneumonia Waxaa lagu daaweeyaa caawinta antibiotics "Sulfadimezin" (5 g halkii qof ayaa lagu daraa quudinta, koorsadu waa 6 maalmood), fitamiin-macdanta ayaa lagu daraa quudinta;
colibacteriosis waxaa lagu daaweeyaa "Avidox" (isku darka 2 g halkii 1 kg oo quudin, koorso - 5 maalmood);
salmonellosis Waxaa si wax ku ool ah loo daaweyn karaa "Biomitsin", tetracycline (1 mg halkii 1 litir oo biyo ah ayaa lagu daraa cabitaan, saddex jeer maalintii, illaa shan maalmood oo daweyn ah);
pasteurellosis lagu daaweeyo "norsulfazol" (oo lagu daray quudinta 0.5 g hal raashin, shan maalmood);
sanka oo dareema - dhaq sarkhada leh xal casaan oo daciif ah ee kiriimiga ama furatilinom 1%.
Salmonellosis ee digaagga, sidoo kale, shimbiraha waxay ku xanuunsan karaan heerkul hooseeya. Dhaqdhaqaaqa barafka ayaa kaa caawin doona inaad ku xoqdo aagagga ay saameeyeen dufanka goose.
Waa muhiim! Maalmaha jiilaalka shimbir ayaa loo deyn karaa socod loogu talagalay oo keliya dhowr saacadood iyo kaliya maalinta cadceeda oo aan lahayn baraf adag.
Calaamadaha kala duwan
Waxaad ogaan kartaa in wax khalad ah ay ku jiraan shimbiraha, sababtoo ah calaamado kala duwan, dibadda dibedda, dabeecadaha ama calaamadaha jirka.
Miisaanka oo lumaa oo dhinto
Miisaanka luminta waxaa lagu arkay dhammaan cudurada faafa, iyo sidoo kale inta lagu jiro infekshanka goosgooska. Miisaanka ugu weyn ee luminta digaagga waxaa lagu arkay cudurada sida:
Daaweynta waxaa lagu sameeyaa caawinta antibiyootigga, shimbirta ayaa la siiyaa fiitamiino, oo loo isticmaalo cadarku. Tusaale ahaan, marka furuqa lagu daro si loo cabbo xal jeermis dilaac oo ah kaneecada. Halkan waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in cudurada noocaan oo kale ah sida cudurka Newcastle, neurolymphatosis iyo ringworm aan la aqbalin daaweynta.
Dhiigga ka soo baxa dabada
Coccidiosis iyo aspergillosis waxay ku kala duwan yihiin shuban dhiig leh. Xaaladda kowaad, antibiotics waxaa loo isticmaalaa (sulfadimezin - 5 g halkii qofba, lix maalmood); saliid kalluun ayaa lagu daraa fitamiin. Aspergillosis waxaa lagu daaweeyaa antibiotics antifungal iyo daaweynta iodine.
Baro sida loo daaweeyo coccidiosis digaagga iyo digaagga qaangaarka ah.
Xiiqda iyo dhimashada
Xiiqdheer xoog leh ayaa laga maqli karaa ukumaha sababta oo ah:
laryngotracheitis (daaweyntiisa waxaa lagu sharaxay kor);
colisepticaemia - "Doreen" 10 mg halkii litir oo cabitaan ah, shan maalmood;
qaaxada looma daaweynayo;
ifilada digaagga - lama daweyn;
atony of goiter.
Aan ka hadalno cudurada ugu dambeeya ee faahfaahin dheeraad ah, sababtoo ah kiiskan shimbirta ayaa u dhiman kara indhahaaga horteeda. Atonia waxaa sababa dib u dhac ku yimaada raashinka digaaga ee digaaga, waxay kor u qaadeysaa cabbirka illaa inta uu jiidayo hawo-mareenka. Waxaad xallin kartaa xaalada: kuxiriirta leh tube ama sirinjo la'aan irbadda, ku shub saliida gabbaldayaha yar yar, duugi goomaha si aad u fidin karto quudinta adag. Ka dib - nadiifi gooshiigeeda, cab a pumasiyanka potassium casaan daciif.
Inaad noqoto mid la xakameynayo iyo cadad
Shubanka cad waa calaamad muujinaysa jooniska. Haddii uu cudurku bilaabo, daaweyntu ma caawinayso, kiiskana shimbirta waa in la la gowraco, waa in bakhtigu la geeyaa.
Waa muhiim! Digaagga oo dillaacaya digaag cudurka qabaa waa foori ay suuragal tahay in infekshanku yeesho.
Dadka shakhsiyaadka qaba ayaa ka soocaya kuwa caafimaadka qaba oo lagu daaweeyo furazolidone (4 mg halkii quudin qof qof weyn) ama tetracycline, "Biomycin". Koorsada daaweynta waa ugu yaraan toddobaad. Qabo dhameystir nadiifinta coop. Shubanka cad ee digaagga
Dhimasho ku dhinta
Xaaladaha aan la filaynin ee dhimashada sababo macquul ah waxay noqon karaan xanuunka caloosha iyo Gumboro. Cudurada ayaa kicin kara kalyo-foosha ama wadnida wadnaha. Labadaba iyaga ma laha calaamadaha muuqda, laakiin haddii dhakhtarku la daaweyn karo, markaa Gamboro kama jawaabto daaweynta. Iyadoo la isticmaalayo dharbaaxo iyadoo la isticmaalayo siriinjo caafimaad, oo lagu xoqdo godka caloosha, bamgaree biyaha dareeraha ah. Mustaqbalka, waxaad u baahan tahay inaad la tashato dhakhtar xoolaad ah oo ku saabsan cuntada ee digaaga.
Akhri sida loola dhaqmo shubanka ee digaagga.
Hal mid ha u dhintee
Sababaha dhimashada ee digaagga iyo lakabyada:
quudinta tayada yar;
xaaladaha nadaafadda, qabow ama kuleylka, la'aanta hawo nadiif ah iyo waxyaabo kale oo aan sax ahayn ee ku jira mawduuca;
cudurrada faafa iyo cudurrada fayraska;
la'aanta fitamiinada ama, liddi ku ah, xad-dhaafkooda;
cannibalism ee shimbiraha;
Marka la eego xashiishadda: xaaladdan ayaa soo ifbaxaysa sababtoo ah gardarrada dadka shakhsiyaadka ah oo leh kuwa daciif ah. Si looga hortago dhibaatada, shimbir gardarro ah ayaa si gooni ah loogu kaydiyaa, haddii ay sii socoto in ay jilciso deriska, waa la gowracay. Meelaha loogu talagalay saxitaanka dhibbanayaasha waxaa lagu daaweeyaa kaneecada, geedaha. Maadaama ay sabab u tahay dagaal cuno, waa inaad sameysid cabitaanno iyo nuujin. Digaagga waa inaysan lahayn wax sabab u ah tartanka.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay rikoodhka Guinness Book of Records, roodhiga rikoodhada ah ee England loo yaqaan Gariett ayaa dhigay ukunta leh dhexroor oo ah 23 sentimitir.
Dooro digaagga dixirigoodu wuu dhimanayaa
Xaqiiqdii gooryaanku waxay kicin karaan dhimashada shimbiraha. Waxay si degdeg ah ugu faafaan jirka oo dhan, waxay leeyihiin bacrimin weyn. Gaadiidka jirka ee gooryaanka martida, waxay saameyn kartaa xubnaha kala duwan: wadnaha, sambabada, mareenka caloosha iyo kuwa kale. Waxay soo saaraan walxaha sunta ah ee jidhka oo burburin kara shaqada nidaamka dareemayaasha, oo saameeya unugyada dhiigga cas. Intaa waxaa dheer, Gooryaanka ayaa ku quudiya maaddooyinka waxtarka leh ee laga helo cuntada digaagga. Sidaa darteed, hen ma helayaan macdanta ama fitamiino, si tartiib tartiib ah u lumiso miisaanka, caafimaadka, joojiso oo ay dhinto oo dhinto.
Ka takhalus digaagga daroogada gooryaanka ayaa caawin doona "Alben."
Sababta dhimashada lakabyada ma aha cuduro kaliya. Xannaanooyinka daryeelka iyo dayactirka ayaa badanaa ka xanaajiya dhibaatooyinka caafimaad ee shimbiraha.
Nafaqada saboolka ah ee tayada lihi, la'aanta dheelitirka fiitamiinada iyo macdanta, maaddooyinka kale ee waxtarka leh ayaa ka xanaajin kara cudurrada mareenka caloosha iyo habdhiska indhaha ee ku jira shimbiraha (gaastrenterenteritis, avitaminosis, hypovitaminosis, salpingitis). Cudurka ugu dambeeya, habka, wuxuu keeni karaa prolapse ee oviduct ee lakabka. Haddii dhakhtarka xoolaha, ka dib marka la baaro xoolaha, cudurada iyo fayrasyada laga saaro, markaa dhibaatadu waxay ku xiran tahay cuntada, habka dib loo eegayo. First of dhan, waxaan u baahan nahay quwad tayo sare leh oo loogu talagalay ukunta ukunta. Intaa waxaa dheer, shimbiraha ayaa loo baahan yahay mash qoyan leh khudaarta, miraha iyo geedo yaryar. Digaagga jecel bocorka, baradhada, dabacasaha, ubaxyada iyo caleemaha løvetann, nettle. Calcium supplements waxaa hubaal ah in lagu daro xayawaanka: nuurad, dhagax dhagax, qolof la jajabiyey. Xayawaanka waa in had iyo jeer la helaa biyo cusub oo nadiif ah.
Baro sida si habboon u quudinta digaagga, waxa cawska lagu daro cuntada, iyo sidoo kale sida loo diyaariyo quudinta gacmahaaga.
Xaalado aan habooneyn
Sidaas darteed, boosaska xaaladaha xabsiyada:
heerkul aan habooneyn;
iftiin ku filan;
xaalado aan caafimaad lahayn.
Waa muhiim in xayawaannada shimbiraha ah lagu raaxeysto, qolka digaagga lagu hayo waa in aan la marin. Hal talaabo oo mitir qofkiiba ayaa lagula talinayaa. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo habka hawo-qaadashada hawada cusub, xilliga diirran waxa uu noqon karaa dariishado iyo albaabo. Inta lagu jiro xilliga qaboobaha, waa muhiim inaad bixiso hawo-qaadasho, taas oo horay looga fikiray markii la dhisayo coop digaag. Waa inay bixisaa heer ku filan oo hawo nadiif ah leh iyada oo aan la qorin. Shimbiraha - digaagga iyo dadka waaweynba - waxay u baahan yihiin heerkul gaar ah, waxay si siman u saameeyeen qabow iyo kuleylka. Tilmaamayaasha waa in lagu hayaa heerka + 12 ... +20 ° S.
Ma taqaanaa? Digaag dheer oo nool, oo burburiyay qiyaastii shan kun oo ukumood ah nolosheeda, ayaa ku noolayd gobolka Shiinaha ee Yunnan. Lakabka wakhtiga diiwaangelinta xaqiiqdu waxay ahayd 22 sano jir.
Digaagga, iftiinka wuxuu ka ciyaaraa kaalin gaar ah. Wax-soo-saarka ayaa aad u sarreeya marka la eego iftiinka qoraxda ugu yaraan 14 saacadood. Si taas loo sameeyo, saacadaha qaarkood waxaa ka mid ah iftiinka macmalka, taas oo kordhinaysa dhererka maalinta.
Shimbiraha waa inay ku socon karaan. Isla mar ahaantaana, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo digaagga ka soo booqashada shimbiraha duurjoogta ah, ugaarsado, iyagoo daboolaya deyrka leh shabaqa. Waa lagama maarmaan inay hoy u noqoto hoyga qorraxda iyo roobka. Hubi in dhirta sunta ah ay ku koraan dhulka, walxaha fiiqan oo dhaawici kara aan la kala firdhin. Sidoo kale ku qubeyso dambas, oo xayawaanku ku maydhaan si ay u nadiifiyaan dulin. Xilliga jiilaalka, waxaa loo wareejiyaa dhismaha. Coop oo leh dayrka si loo nadiifiyo - damaanad qaadka caafimaadka. U hubso inaad si joogto ah u dhaqdo saxarada biyaha iyo quudka, qoobkaciyaasha iyo hareeraha, derbiyada qolka. Markaad hesho wasakh, is beddel qashin, ka saar qashin iyo haraaga cuntada. Si joogta ah jeermi-feeraha iyo bakteeriya, waxaad ka iibsan kartaa xal gaar ah dukaanka xayawaanka, waxaad isticmaali kartaa xalka hydrochloric acid oo leh 5% 1, xal auku oo ah budada iodine iyo budada aluminium (1, 5 litir oo biyo ah - 1 g oo budada ah iyo 10 g of iodine ).
Waxaan kugula talineynaa inaad barato sidii aad u dhisi laheyd cagaarka digaagga.
Oo gebogebadii: Digaagga waa abuur aan qabyo ahayn, laakiin tani micnaheedu ma aha in content aysan u baahnayn xeerar gaar ah. Layers aan ahayn dad badan, cunto nafaqo leh, iftiin iyo diirran si ay uga jawaabaan daryeelka ayaa kugu farxi doona waxtarkooda.